mairie-antananarivo – Filankevitra Monisipaly : Taxi-Be – Taxi
auteur 21 aprily 2017 Commentaires fermés
Mitohy hatrany ny Fivoriana ara-potoana tanterahan’ny Filankevitra Monisipalin’ny Tananan’Antananarivo ny Zoma 21 Aprily 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely. Nifampiresaka nivantana hikatsahana ny vahaolana ny Mpanolotsain’ny Tanàna sy ny Mpanatanteraka andaniny; Ny Taxi sy ny Taxi Be kosa an-kilany. Nilaza ireo Mpitatitra fa tsy zakan’izy ireo ny karazana vola takian’ny Kaominina amin’izy ireo kanefa efa mizaka ny tsy eran’ny aina izy ireo toy ny faharatsian’ny lalana sy ny fahalafosan’ny kojakojan’ny fiara ary ny vidin-tsolika. Teo koa ny filazana fa izay mandoa ihany no mandoa izay iharan’ny fanaraha-maso akaiky sy ny sazy kanefa misy ireo Mpisoloky manao ny asam-pitaterana miriaria etsy sy eroa.
Anisan’ny voaresaka ny momba ny Droit de Contre Visite, ny Droit de désinfections, ny Droit des Stationnements, Ny Droit d’Agrement. Ny Mpanolontsaina sasany kosa nanambara fa tokony hiezaka ny mpitatitra mba hanatsara ny Service atolony ny Mpanjifa. Nisy koa ny fifanazavana momba ny Lanterne izay mila mangarahara tanteraka satria miteraka resabe eo amin’ny be sy ny maro toy ny fizarana ilay Lanterne sy ny fisian’ny Dokam-barotra amin’ireny Lanterne ireny. Hitohy ny fifampidinihana ka hiaraka hidinika ny Taxi Be sy ny Taxi, ny Mpanolontsain’ny Tanàna, ny Mpanatanteraka ao amin’ny Fiadidiana ny tanànan’ Antananarivo. Nisongadina nandritra ny fihaonana fa tsy maintsy tsinjovina koa ny tombotsoan’ny vahoaka. Fantatra fa mila jerena akaiky ny olana momba ny Tobim-piantsonana. 7000 kosa ny isan’ ny Taxi eto Antananarivo amin’izao fotoana izao.
Tafiditra ihany koa ny Resaka Easy Park sy AMETIS tao amin’ny fivorian’ny Mpanolontsaina Monisipaly androany amin’ny fanaovana ny tatitra sy dinidinika amin’ny ankapoben’ny asa mba ho fampandrosoana ny Tanàna ary ahafantaran’ny bebe kokoa ny andraikitr’izy ireo. Nanambara ny olana mianjady aminy ny Talen’ny Easy PARK amin’ny fomba hanesorna ireo fiara eny amin’ny parking manao fivarotana volamena sy ireo mpivarotra volamena ary mpanamboatra finday fa an’isany miteraka olana ka mila jerena manokana miaraka amin’ny kaominina.
Nampafantatra koa izy fa efa tafiditra ao amin’ny « tahirim-bola Monisipaly » ny kaominina ny taona 2017 ity ny vola niditra fa mangataka fotsiny ny trésorie Monisipaly ny fomba rehetra ahafahana manao fisavana ; noho izany dia mangarahara ny vola avy amin’ny Easy Park (47% hatramin’ny 57% ny taux de recouvrement). Marihana ihany koa fa efa nosoloina « carte chargeable » ny carte Easy Park, afaka ampidirana 10.000 ar hatramin’ny 150.000ar izany. Efa hisy koa ny fomba fandoavana vola eny amin’ny Mobile Money na Mvola amin’ny fandoavana ny saran’ny parking sy sazy.
Tsara ho fantatra ihany koa fa 2956 ny toerana misy parking tantanan’ny Easy Park amin’izao fotoana izao, raha 3850 teo taloha. Nisy mantsy ireo « zone Résidence » toy ny tetsy Ambondrona, Tsiazotafo izay najanona. Ireo olona manao akanjo maintso na ASVP izay miasa eny amin’ny parking ihany koa dia olon’ny EASY PARK manatevina ny fisavana amin’ny olona tsy mandoa vola, izy ireo dia nahavita fiofanana avy amin’ny «Foibe fiofanan’ny polisim-pirenena» etsy Ivato ary ny 8 mai izao no hanao fianianana etsy Anosy.
Efa ho 8 volana izay no niarahan’ny Orinasa AMETIS sy ny kaominina Antananarivo miasa amin’ny fiadiana ny hosoka amin’ny fanaovana taratasy ofisialy sy fanisana ireo tsena sy mpivarotra ary ireo fitaterana sy ny fanaovana ny fanaraha-maso ny taratasy ofisialy sy ny « autorisation isan-karazany. Ka 6800 no taxi ville efa vita fanisana ao anatin’ny « base de données » fa ny taxi be mbola tsy vita. Efa vita ihany koa ny fanisana ireo mpivarotra. 90 ny « permis de construction » no efa nandalo teo aminy, 640 ny taratasy vita « sécurisation » ary 4.000.000 d’ariary ny « recette » navoakan’ny AMETIS.
Misy anefa sakana eo amin’ny fanaovana ny asan’ny AMETIS indrindra eny an-tsena fa tsy mety atao fanisana izy ireo fa manao ambadika politika sy manitatra fa hoe omena ny tsy miankina ny tsena dia izay no antony anaovana io fanisana io ohatra amin’izany ny etsy amin’ny Pochard sy Behoririka. Noho izany olana izany dia nanambara ny PDG ny AMETIS fa matiantoka ry zareo.